मैलुङ खोला जलविद्युतको आईपीओ बिक्री खुला, आवेदन दिनु अघि कस्तो छ कम्पनी? हेरौं - DURBAR TIMES
HomeShare Bazarमैलुङ खोला जलविद्युतको आईपीओ बिक्री खुला, आवेदन दिनु अघि कस्तो छ कम्पनी?...
मैलुङ खोला जलविद्युतको आईपीओ बिक्री खुला, आवेदन दिनु अघि कस्तो छ कम्पनी? हेरौं
मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीले आज (साउन १४ गते) देखि सर्वसाधारणमा प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्काशन ल्याएको छ। कम्पनीले प्रतिशेयर १०० अंकित मूल्यमा ७ लाख ३६ हजार २८६ कित्ता शेयर निष्काशनमा ल्याएको हो।
कस्तो छ रेटिङ ?
क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ नेपालले मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीलाई ‘केयर–एनपी इस्युअर रेटिङ डी’ प्रदान गरेको छ । यस रेटिङले निष्काशनकर्ता कम्पनीले वित्तीय दायित्व पूरा नगरेको वा छिट्टै पूरा गर्न नसक्ने जनाउँछ । केयरले सने २०२० डिसेम्बर २८ मा उक्त रेटिङ प्रदान गरेको हो । सो मितिले १ वर्षसम्म उक्त रेटिङ बहाल रहनेछ ।
पछिल्लो समय आइपीओमा आवेदन दिने लगानीकर्ताको संख्यालाई आधार मान्ने हो भने मैलुङ खोलाको आइपीओमा पनि १० कित्ताका लागि आवेदन दिँदा पर्याप्त हुने देखिन्छ । यस कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि ६ लाख ८४ हजार ७४६ कित्ता सेयर मात्र निष्कासन गर्न लागेको छ । यसआधारमा, न्यूनतम १० कित्ताले बाँडफाँट गर्दा पनि ६८ हजार ४७४ जना लगानीकर्ताले मात्र सेयर पाउनेछन् । यद्दपि, पछिल्लो समय आइपीओमा आवेदन दिने लगानीकर्ताको संख्या भने २० लाख भन्दा बढी पुग्न थालेको छ । यसआधारमा मैलुङ खोलाको १० कित्ता सेयर पाउन पनि भाग्यमै भर पर्नुपर्ने देखिन्छ । तथापि, यसमा कति आवेदकले कति कित्ताका लागि आवेदन दिनेछन् भनेर अहिले नै अनुमान गर्नु उचित हुँदैन ।
आयोजनको वित्तिय विवरण
कम्पनीले २०५८ साउन ९ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता सम्पन्न गरेको थियो । परियोजना निर्माणका लागि चाहिने सबै प्रकारका स्वीकृति तथा अनुमतिहरु प्राप्त गरी मैलुङ खोला ५ मेगावाट जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन तथा वितरण कार्य सुरु गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ । यस आयोजनाले २०७१ असार १९ गतेदेखि नै व्यावसायिक उत्पादन गर्दै आएको कम्पनीको भनाई छ । यद्दपि, २०७२ सालको भुकम्पपछि रोकिएको विद्युत उत्पादन २०७३ भदौ १ गतेदेखि पुनः सुरु भएको थियो । आयोजनाको कुल लागत ७४ करोड ४५ लाख २१ हजार ९१० रुपैयाँ रहेको छ भने प्रतिमेगावाट लाग १४ करोड ८९ लाख ४ हजार ३८२ रुपैयाँ रहेको छ । आयोजनाको कुल लागत रकम ९० करोड २९ लाख ३५ हजार ४९६ रुपैयाँ र प्रतिमेगावाट उत्पादन लागत रकम १८ करोड ५ लाख ८७ हजार १०० रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले लगानी फिर्ता हुने साधारण अवधि ६ वर्ष २ महिना तथा डिस्काउन्टमा लगानी फिर्ता हुने अवधि १० वर्ष ६ महिना रहेको प्रक्षेपण गरेको छ ।
पुँजी संरचना र वित्तीय प्रक्षेपण : तीन वर्षमा सञ्चित नाफा करिब ७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ पुर्याउने
मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको अधिकृत पुँजी ७५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, जारी पुँजी ३६ करोड ८१ लाख ४३ हजार रुपैयाँ छ । यसमध्ये संस्थापक सेयरधनी र आयोजना प्रभावित स्थानीयबाट कुल २९ करोड ४५ लाख १४ हजार ४०० रुपैयाँ चुक्ता भइसकेको छ । सर्वसाधारणलाई जारी हुन लागेको आइपीओ सबै बिक्री भएपछि मैलुख खोलाको चुक्ता पुँजी जारी पुँजीको बराबर अर्थात ३६ करोड ८१ लाख ४६ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । कम्पनीमा संस्थापक सेयरधनीको हिस्सा ७०%, स्थानीयको १०% र सर्वसाधारणको २०% कायम हुनेछ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९–८० सम्म पुँजी बढाउने कुनै योजना बनाएको छैन । उक्त आवसम्म आइपीओ बिक्रीपछि कायम हुने पुँजी नै यथावत रहेनछ । वित्तीय प्रक्षेपण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म खुद नाफा २ करोड ९८ लाख ७२ हजार रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा ३ करोड ६२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिसेयर आम्दानी ८ रुपैयाँ ११ पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ १२० रुपैयाँ ८७ पैसा पुग्नेछ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० सम्ममा प्रतिसेयर आम्दानी ९ रुपैयाँ ८५ पैसा पुग्नेछ । प्रतिसेयर नेटवर्थ पनि १२० रुपैयाँ ७२ पैसा हुनेछ ।
यस हाइड्रोपावरमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सोपान मल्टिपल कम्पनी लिमिटेडको रहेको छ । यसको कुल ११ लाख ५३ हजार ४८८ कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ । यस्तै, कृति कुमारी महतोको ५९ हजार ६५२ कित्ता सेयर रहेको छ । यस हाइड्रोमा कुल आधारभूत सेयरधनीको संख्या ९ जना रहेको छ । यस्तै, संञ्चालक समितिमा ७ जना सदस्य रहेका छन् ।
कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम एक लाख कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। कम्पनीको आईपीओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृती प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सि आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था, तोकिएका शाखा कार्यालयबाट र मेरो शेयर मोबाइल एपबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ।
Previous articleअब मेरो शेयरको पासवर्ड आफै रिसेट गर्न पाउने, यही साता सुबिधा थपिने
Next articleअर्थमन्त्रालयले सेबोनका अध्यक्षसँग सोध्याे स्पष्टीकरण, के छ स्पष्टीकरणमा हेर्नुहोस्